MyLann Foodie's Review #3 (Yoogane Junction Mawtin) 1678 views
"MyLann Foodie's Review" အစီအစဉ် #3
*** Yoogane (Junction Maw Tin)
Yoogane Myanmar Junction Maw Tin Branch Grand Opening and FREE TESTING – 30th Dec 2014
Yoogane ရဲ့ ဒီEventကို တွေ့ကတည်းက တစ်ခါတည်း GOING ဆိုတဲ့ Button ကိုနှိပ်ပြီးသားပဲ.. ပုလဲကွန်ဒိုမှာ တစ်ခါစားပြီးတည်းက ထပ်စားချင်နေတာဆိုတော့ ဒီလိုအခွင့်အရေးကို Pop Cornတို့က ဘယ်လက်လွတ်ခံလိမ့်မလဲ.. FREE TESTING ဆိုတော့ ပိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့.. Yooganeဆိုတာကို စသိခဲ့ရတာက TV Channel တစ်ခု၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်မှ ဖြစ်ပါတယ်.. ထိုအချိန်တည်းက စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပြီး ပုလဲကွန်ဒိုမှာ ဆိုင်ဖွင့်ပြီဆိုတော့ သွားရောက်မြည်းစမ်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီနေ့လည်း Junction Maw Tinဆီသို့ ချီတက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. .. ..
Junction Maw Tin က ဆိုင်ခွဲအသစ်ကို ခမ်းခမ်းနားနားဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးတော့ ရောက်ရှိလာတဲ့ ဧည့်သည်များကို Yoogane ရဲ့ Chicken Galbi နဲ့ တည်ခင်းဧည့်ခံပါတယ်.. Chicken Galbiဆိုတာကတော့ လတ်ဆတ်သော အသီးအရွက်များ (ဂေါ်ဖီထုပ်၊ အာလူး၊ ကြက်သွန်မြိတ်)၊ တော့ပိုကီ၊ နူးနူးညံ့ညံ့ ကြက်သားနဲ့ Yoogane ရဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားသော ငရုပ်သီးဆော့စ်တို့ဖြင့် ရောနှောချက်ပြုတ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. စားသုံးသူရဲ့ရှေ့မှာပဲ ဂက်စ်မီးဖိုဖြင့် ချက်ပြုတ်ပေးပြီး၊ ချက်ပြီးပြီးချင်း ပူပူနွေးနွေးစားစေပါတယ်.. Yooganeရဲ့ ငရုပ်သီးဆော့စ်နဲ့ နယ်ထားတဲ့ ကြက်သားက တော်တော်နူးညံ့ပါတယ်.. အစပ်ကဲပေမယ့် အရသာလည်း တော်တော်ကောင်းမွန်တာ တွေ့ရပါတယ်.. အသီးအရွက်များက လတ်ဆတ်တာကြောင့် ချိုနေပြီး ကြက်သားစပ်စပ်လေးနဲ့ အလွန်ကို လိုက်ဖက်လှပါတယ်.. ပြီးတော့ ထိုဟင်းလျာနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးရန် ချပေးသော ဂေါ်ဖီ၊ မုန်လာဥနီအချဉ် နဲ့ ကင်မ်ချီကလည်း အတွဲညီလှပါတယ်.. Chicken Galbiကို စားနေရင်း တစ်ဝက်လောက်ကျတော့ ထမင်းဖြူပေါ်မှာ ရေညှိနဲ့ အနှစ်အနည်းငယ်စမ်းထားတဲ့ ထမင်းတစ်ပွဲကို ယူလာပါတယ်.. ကျန်တဲ့ကြက်သား Galbiထဲကို ရောထည့်မွှေနှောက်ရင်း ထမင်းကြော်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်ပြီး ဆက်စားပါတယ်.. ထူးခြားမှုက “ဆီ”နဲ့ ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်တာကို မတွေ့ခဲ့ပါဘူး.. ပုလဲကွန်ဒိုဆိုင် ရောက်စဉ်က “ကြက်သားစတူး”ကိုလည်း စားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..ကြက်သားကို ပဲကြာဇံများများနဲ့ အရည်စပ်စပ်ချက်ထားပြီးတော့ အစပ်ကဲတဲ့အရသာမျိုးဖြစ်ပါတယ်.. ပဲကြာဇံကြိုက်သူအတွက်တော့ အဆင်ပြေတဲ့အစားအစာပါ.. ပြီးတော့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ တွေ့တွေ့နေကျ “ကြက်ဥလိပ်”ကိုလည်း မြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်.. ကြက်ဥထဲမှာ ကြက်သွန်မြိတ်နဲ့ မုန်လာဥနီကို ပါးပါးလှီးထဲ့ထားပြီး အရသာကတော့ သိပ်ထူးခြားမှုမရှိပါဘူး..
Yoogane တွင် ကြက်သားဂါးလ်ဘိအပြင် ပင်လယ်စာနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ ပင်လယ်စာကြက်သားဂါးလ်ဘိ၊ ထမင်းကြော်များ၊ တော့ပိုကီအမျိုးမျိုး၊ ဂါးလ်ဘိများနှင့်တွဲဖက်စားသုံးနိုင်သည့် ခေါက်ဆွဲများလည်း ရရှိပါတယ်..
အစားအသောက်တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ သက်သာတဲ့အထဲမှာ မပါပါဘူး.. အဓိက အစားအစာဖြစ်တဲ့ ကြက်သားဂါးလ်ဘိက တစ်ယောက်စာကို အနည်းဆုံး ၇,၈၀၀ ကျပ်မှစလို့ ၁၁,၀၀၀ကျပ်အထိ ရှိပါတယ်.. နေရာထိုင်ခင်းကတော့ ယနေ့ခေတ် စားသောက်ဆိုင်များ Decorationကို အဓိကထား ပြင်ဆင်ကြတဲ့အတိုင်း Yooganeကလည်း မလျော့အောင် ပြင်ဆင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်.. အနှစ်သက်ဆုံးကတော့ နံရံပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဆိုင်ဝန်ထမ်းအားလုံးလည်း သွက်သွက်လက်လက်ရှိသည့်အပြင် ဆိုင်၏ MD (ကိုရီးယားလူမျိုး)ကိုယ်တိုင် စားသုံးသူများကို နေရာချပေးနေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်.. အခုဆိုရင် Pop Cornလည်း ကိုရီးယားအစားအစာတွေနဲ့ တော်တော်ရင်းနှီးနေပါပြီ.. ကိုရီးယားပရိတ်သတ်များလည်း ကိုရီးယားအစားအစာ အသစ်အဆန်းများကို မြည်းစမ်းကြည့်ကြပါဦးလို့..
(စကားချပ် - တစ်ခါစားပြီးတိုင်းတစ်ခါ ဆံပင်မှာ အနံ့တွေစွဲလာတာကလွဲလို့ ကျန်တာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်..)
Level 4, Junction Maw Tin
"MyLann Foodie's Review" #3
When I saw this Yoogane’s event one day, I already made up my mind that I was going… Since the first time I tried at the Pearl Condo branch, I’ve been waiting for the second time again, so I just couldn’t miss this kind of opportunity and event…Well, since it’s Free Tasting, it was even easier decision…:D I knew about Yoogane through an interview on one TV Channel, then I went to their Pearl Condo branch and tried, now again at Junction Mawtin branch…Here we go!
At this grand opening event, Yoogane treated all the guests with their famous Chicken Galbi (a stir fried dish mixed well with tender chicken pieces, fresh vegetables such as cabbages, potatoes and green onions, tteokbokki (korean soft rice cakes), and special Yoogane red sauce… The staff cooked all the food in front of the customers onahot plate with gas stove and served it warm and fresh… The chicken mixed with Yoogane special sauce is especially very tender and delicious… It wasalittle bit spicy for me but the good taste was overwhelming… The vegetables were extremely fresh and their natural sweetness wasagood match with the spicy chicken… In the middle of my chicken galbi meal, they brought inarice bowl topped with little seaweed and some sauce… Then, they put all that rice into the frying pan and started stir frying together with the rest of chicken galbi and it becameafried rice with chicken galbi The good thing about this dish is I saw very little oil was used to cook…
At the Pearl Condo branch, I tried Chicken Stew, which wasaspicy dish mixed with vermicelli, chicken, and spicy broth… For vermicelli lovers, this dish is probablyasmart choice at Yoogane… Another thing I tried was Egg Roll which is usually seen in many Korean dramas… Inside the egg roll were small bits of green onions and carrots, but the taste was just ordinary… At Yoogane, in addition to Chicken Galbi, you can get Seafood Galbi, Galbi Fried Rice, different tteokbokki dishes, andagood variety of cold and hot noodles…
Yoogane’s price range is definitely above average… Their signature dish, Chicken Galbi, is about 7800 Kyats to 11000 Kyats for one person’s portion… In terms of decoration, Yoogane has tried their best not to stand lower than nowadays new shops’…My favorite part of its decoration was the wall paintings that attracted me the first moment I came into the shop… All the staff were super friendly, and hardworking, along with the shop’s MD who was also running around and serving the customers, which I thought was very inspiring to observe… Now, I’m more familiar with Korean food and their dish names, so to all Korean food lovers, please go try at Yoogane foradifferent and new Korean dining experience…
(P.S. The only small problem was that everytime after my dinner there, my entire hair smells like food :D)